Global Voices teny Malagasy » Mpikatroka Sady Tonian-dahatsoratra Thailandey Voasazy Higadra 11 Taona An-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Marsa 2013 13:41 GMT 1	 · Mpanoratra Aim Sinpeng Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Tao anatin'ny efitranom-pitsarana hiboka olona tao Bangkok, tafintohina, sosotra  tanteraka ireo thailandey taorian'ny didy fanamelohana higadra 11 taona an-tranomaizina navoakan'ny Fitsarana Heloka Bevava ho an'ilay mpikatroka ny zon'ny mpiasa sady tonian-dahatsoratra ao amin'ny Voice of Taksin, Somyot Prueksakasemsuk noho ny heloka fanevatevana mpanjaka. Tsy noho ny didy manameloka azy ihany no tena nahatonga ny fahasosorana fa noho ny hamafin'ny sazy  ihany koa. Raha tokony ho 15 taona an-tranomaizina no sazy farany ambony indrindra amin'ny fanevatevana mpanjaka, sazy an-tranomaizina mandritra ny fotoana fohy no navoaka taminà raharaham-pitsarana teo aloha. Tsy mba nahazo izany anefa i Somyot, fa voaheloka higadra 5 taona isak'ireo fiampangana azy, izay miisa roa, ary miampy herintaona an-tranomaizina tamin'ny sazy mihantona azony tamin'ny 2009 (fiampangana hafa) izay tsy maintsy mihatra avy hatrany ankehitriny.
Narahin'ireo polisy i Somyot taorian'ny didy (sazy an-tranomaizina 11 taona) navoakan'ny Fitsarana Misahana ny Heloka Bevava. Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Copyright @Demotix (1/23/2013)
Diso fanantenana tanteraka i Somyot, nanantena izy fa ho afaka madiodio satria nihevitra izy fa tsy nanao heloka. Araka ny tatitra  avy amin'i Prachatai, nanambara ny naman'i Somyot izay migadra ao amin'ny fonja ao Thailandy, fonja nitazomana an'i Somyot nandritra ny 20 volana mahery, fa nanantena i Somyot fa hampihatra ny marina ny Fitsarana ary hitsara ara-drariny.’ Nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ambony ny mpisolo vavany ary hangataka famotsorana amin'ny fandoavana onitra.
Noho ny votoatin'ny fiampangana azy no mahatonga an'i Somyot ho be fanantenana. Lehiben'ny tonian-dahatsoratra amin'ny gazetiboky politika, Voice of Taksin (boky efa voaràra tamin'ny taona 2010) i Somyot, izay namoaka lahatsoratra roa voalaza fa nanitsakitsaka lalàna momba ny fanajana mpanjaka tamin'ny taona 2010. Niakatra fitsarana izy tamin'ny taona 2011, ary nolavina in-12 ny fangatahany famotsorana mandoa onitra ka voaheloka ihany izy tamin'ny 23 Janoary 2013. Tamin'ny alalan'ny solon'anarana (pseudonyme) no namoahana ireo lahatsoratra ary tsy voalaza mivantana tao ny momba ny fitondram-panjaka. Na dia izany aza, nihevitra ny fitsarana fa mazava be ny olona tian'ny lahatsoratra kendrena sy lazaina ary amin'ny maha-lehiben'ny tonian-dahatsoratra, tokony ho fantatry Somyot tsara ny votoatin-kevitra soratany sy avoakany kanefa mbola navoakany ihany ilay lahatsoratra
“Nampiseho ny fitsarana heloka bevava fa tsy nahitana fijerinà mpianatra ambony mikasika ny fitondram-panjakana ilay lahatsoratra navoakan'i Somyot. Fanevatevana no hita tamin'ny votoatin-dahatsoratra ary niteraka fanalam-baraka ho an'ny mpanjaka,” araka ny filazan’ ilay mpitsara Thawee .
Nahazo tsikera marobe avy amin'ireo vondrona mpiaron'ny zon'olombelona ao Thailandy sy avy any ivelany, ary ny sampam-pahalalambaovao iraisam-pirenena ny didim-pitsarana. Tao Thailandy, na dia izany aza, somary manjavozavo ny fitantaran'ny fampahalalalm-baovao mahazatra izany vaovao izany.
Tahaka ny raharaha teo aloha, somary nizarazara be ihany ny fijerin'ireo mpiserasera momba ny didim-pitsarana navoaka ho an'i Somyot. Nilaza ny sasany fa nahazo ny sahaza azy i Somyot satria mbola nanohy naneho hevitra manitsakitsaka ny lalàna Andininy faha-112  ihany.
mitrapaap naneho hevitra tao amin'ny habaka fifanakalozan-kevitra , Bangkok Post:
Efa nahazo sazy mihantona izy. Fantany tsara ny loza mety hanjò azy raha tsy manakombona ny vavany izy. Tsy maintsy manao safidy araka ny lalàna manan-kery ny olona, na tianao na tsy tianao. Tsy manova ny lalàna ny fanitsakitsahana azy.
ploydonut nanampy hoe :
Firenena mahafinaritra i Thailandy, ary tokony higadra maharitra ela ireo olon-dratsy manevateva ny firenentsika, ny andrim-panjakantsika, sy izay manao heloka bevava .
Khon Thai Hua Jai Singh nanoratra tao amin'ny habaka fifanakalozan-kevitra :
Ho an'ireo mpomba ny hetsika manohitra ny fitondram-panjaka – raha mahita ianao fa tsy toerana tsara onenana i Thailandy noho ny fisian'ny fitondram-panjaka, mandehana misintaka ny firenena maminay, firenena izay manaja ny mpanjakanay.
Na raha mihevitra ianao fa diso fanantenana tamin'ny fanamelohana an'ilay meloka Andriamatoa …. Fotoana hanovànao ny fomba fijerinao izao. Tsy mbola tara ho an'ity fiarahamonina ity sy ny fianakavianao ny mamela anao noho ireo zava-bitanao. Tokony hisafidy ny tokony atao ianao.
Mifanohitra amin'izany, vondrona mpiaro ny zon ‘olombelona ao Thailandy sy any ivelany nanameloka ny didim-pitsarana ary nilaza ny sasany tamin'izy ireo fa nahazo izany sazy henjana izany i Somyot noho izy mpikatroka mitolona amin'ny fanovana  ny lalàna Andininy faha-112
Henjana loatra ny sazy 10 taona an-tranomaizina ho an'ny olona izay tsy mitovy hevitra amin'ny hafa. Zavatra iray tokony hianaran'ny fiarahamonintsika ny fanajana sy fanekena ny hevitry ny hafa sy ny hasiny,” araka ny filazan ‘ilay mpikatroka Thailandey iray.
Luk Chaona nanoratra tao amin'ny habaka fifanakalozan-kevitra  Prachatalk:
Fanagadrana ny fahalalahana hanan-kevitra ny didim-pitsarana fanamelohana an'i Somyot. Mandeha ho azy ho an'ny olombelona ny fananana fijery na hevitra samihafa mikasika toe-javatra iray ary tokony hahay hiara-hiaina amin'ny fiarahamonina ahitana vahoaka samy manana ny heviny sy ny fijeriny ny tsirairay.
Ny fahadisoam-panantenana lehibe, na dia efa tsy mahagaga intsony aza dia ny tsy fisian'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny governemanta Yingluc. Ambonin'izany, mahakasika ny gazetiboky mpomba an'i Thaksin ity raharaha ity izay nitarika ny fampahafantarana ny Lobaka mena (chemise rouge) (Hetsika akaikin'ny Praiminisitra teo aloha Thaksin, anadahin'ny Praiminisitra am-perinasa ankehitriny Yingluck). Nanatrika ny fotoam-pitsarana an'i Somyot ny Filohan'ny UDD, Thida Thavornseth ary nikarakara hetsim-panohanana  ho fanentanana amin'ny “Famotsorana an'i Somyot” ireo vondrona “lobaka mena” marobe. Na izany aza, araka ny efa nampoizina, tsy nitsabaka na naneho hevitra tamin'ity raharaha ity ny antokon'ny fitondrana Pheu Thai. Araka ny filazan'ilay  Profesora Duncan McCargo:
Mitandrina mafy ny toerany i Yingluck Shinawatra mba hiarovany ny fifanekena ara-politika mampijanona azy eo amin'ny fitondrana- ka mahatonga azy hitandro ireo andrim-panjakana mpandala ny netin-drazana ao amin'ny firenena, anisan'izany ny lapan'ny mpanjaka, ny fitsarana sy ny tafika .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/12/45300/
 tafintohina, sosotra: http://asiancorrespondent.com/96065/inside-view-thailands-lese-majeste-law-claims-latest-victim/
 Andininy faha-112: https://globalvoicesonline.org/2012/09/21/thailands-lese-majeste-law-a-strange-legislation-that-needs-reform/
 habaka fifanakalozan-kevitra: http://www.prachatalk.com/webboard/สังคม-การเมือง/ผมลูกชาวนาไทย-คิดว่าคุณสมยศ-พฤกษาเกษมสุข-คือ
 nanampy hoe: http://www.bangkokpost.com/news/local/332219/somyot-jailed-for-11-years-over-royal-insult/page-2/
 araka ny filazan: http://prachatai.com/journal/2013/01/44870